Ukutya oku-5 ekungafanelekanga ukuba kuphekwe kwi-microwave | Bezzia
Ukutya oku-5 ekungafanelanga kuphekwe kwi-microwave
UToñy Torres | 12/01/2022 23:55 | Ukutya
I-microwave sesinye sezo zixhobo ezingasweli nakweliphi na ikhitshi. Isixhobo esincinci esigcwele izinto eziluncedo ongasoloko uyazi indlela yokusisebenzisa ngokuchanekileyo. Ngokuba ngokubanzi, i-microwave isetyenziselwa ukufudumeza ukutya, kodwa inokusetyenziselwa ezinye izinto ezininzi. Ukupheka kwi-microwave kulula, ngokukhawuleza, akubizi kwaye kunempilo, kuba ipheka ukutya kwijusi yayo kwaye inciphisa amafutha.
Nangona kunjalo, okunye ukutya akufanele kuphekwe kwi-microwave. Abanye ngenxa yokuba balahlekelwa iipropati zabo eziphambili kunye nabanye, kuba kunokuba yingozi kwimpilo. Fumanisa ukuba kukuphi ukutya ongafanelanga ukukupheka kwi-microwave. A) Ewe, ungasebenzisa esi sixhobo sincinci iyasebenza kangangokuba yonke imihla itshisa ukutya kwakho ngomzuzu omnye.
1 Yintoni engafanele iphekwe kwi-microwave
1.1 Amaqanda abilisiwe aqinile
1.4 Ubisi lwebele
1.5 Imifuno eluhlaza eluhlaza
Yintoni engafanele iphekwe kwi-microwave
Ukutya okuninzi kunokupheka kwi-microwave ngaphandle kweengxaki, enyanisweni, kukho iindlela zokupheka ezimnandi nezinempilo kule fomati. Nangona kunjalo, okunye ukutya okanye iimveliso akufanele ziphekwe ngolu hlobo, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ezifana nezi siza kukuxelela ngezantsi. Qaphela ukutya ekungafanelanga kuphekwe kwi microwave kwaye uya kukwazi ukuphepha izoyikiso kunye nokucaphukisa.
Amaqanda abilisiwe aqinile
Ukuba ufuna ukulungisa iqanda eliqhotsiweyo elisempilweni kakhulu kwaye elingenaoyile, i-microwave ngumhlobo wakho osenyongweni. Kodwa ukuba into oyifunayo kukutshisa iqanda elibilisiwe, khangela ezinye iindlela okanye uzilungiselele kuqala. Iqanda elibilisiwe akufanele lifakwe kwi-microwave ngenxa umaleko wokufuma wenza ngaphakathi kuwo onokugqabhuka xa ishushu kwi microwave. Ngenxa yesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukukrazula iqanda kwaye ulinqumle ngaphambi kokulibeka ukushisa kwi-micro.
Ukuba ayiphekwanga kakuhle, ibhaktheriya kwinkukhu inokuba yingozi kakhulu kwimpilo yakho. Ngenxa yesi sizathu, inkukhu ekrwada ayifanele iphekwe kwi-microwave, kuba inkqubo yesi sixhobo kukufudumala ukutya ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi. Lo nto ukutya akunakuqinisekiswa ukuba kuphekwe ngokufanelekileyo, kuba ayenzi ngokufanayo. Ngesizathu esifanayo, inyama eluhlaza akufanele iphekwe kwi-microwave.
Okunye kokutya okuhlala kufudunyezwa kwi-microwave yirayisi, enyanisweni zininzi iimveliso ezipakishiweyo ezithengisiweyo ukuze zisetyenziswe kwi-microwave. Noko ke, uhlolisiso lwakutshanje lubonisa ukuba oku kunokuba yingozi kakhulu empilweni. Oku kungenxa yerayisi iqulethe ibhaktheriya ekwazi ukumelana nobushushu obuphezulu azisoloko zifezekiswa kwi-microwave. Ukongeza, le nkqubo idala umaleko wokufuma oyindawo efanelekileyo yeebhaktheriya ezahlukahlukeneyo ukuba zande ezinokubangela ityhefu yokutya.
Ukukhenkcisa ubisi lwebele yindlela efanelekileyo yokwenza uvimba wokutya komntwana wakho. Ngale ndlela, unokuyondla xa eyidinga naxa umama engekho. Ngoku, ukufudumala ubisi lwebele, kungcono ukusebenzisa amanzi ashushu endaweni ye-microwave. Yaziwa kakuhle loo nto esi sixhobo sifudumeza ukutya ngokulinganayo. Ubisi lunokubanda kwelinye icala kwaye lube shushu kakhulu kwelinye.
Imifuno eluhlaza eluhlaza
Xa ishushu kwi-microwave, izondlo kwimifuno enamagqabi aluhlaza zinokuba yingozi kakhulu kwimpilo yakho. Yinto ebizwa ngokuba yi-nitrate, enenzuzo kakhulu empilweni, kodwa xa ishushu kwi-microwave ziguqulwa zibe yi-nitrosamines, into enokuba yi-carcinogenic. Ke ngoko, ukuba unentsalela ye ispinatshi, iklabishi okanye imifuno eluhlaza eluhlaza, kungcono ukuyitshisa epanini ngethontsi yeoli yeoli.
Oku kukutya oku-5 akufanele kuphekwe kwi-microwave, isixhobo esiluncedo kakhulu ukuba sisetyenziswe ngokuchanekileyo. Kwangokunjalo, abafanele babe njalo ukufudumeza ukutya ngomthamo wamanzi aphezulu, njengeziqhamo, njengoko zinokugqabhuka okanye zivelise iibhaktheriya ngenxa yokufuma. Ngezi ngcebiso, ungasebenzisa ngokukhuselekileyo isixhobo sakho sombane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Ukutya » Ukutya oku-5 ekungafanelanga kuphekwe kwi-microwave
Amaqhinga okugcina ekhaya kwaye woyise i-slope kaJanuwari
Indlela yokujongana nesibini nengxaki ebangelwa kukufika komntwana wabo wokuqala
Joyina iBezzia simahla kwaye ufumane konke umxholo wethu kwi-imeyile yakho